लकडाउन बन्यो मग्न मनहरुको सडक - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home सौजन्य लकडाउन बन्यो मग्न मनहरुको सडक
By सुधिर ढुङ्गेल
साँझको समय । चिल्लो कालोपत्रे सडक । जेठको प्रचण्ड गर्मी । गर्मीबाट राहतको खोजीमा ३ वर्षको साना बालबालिकादेखि तन्नेरीहरुको एक झुण्ड मुखमा मुखौटो लगाएर सडकमा निस्कन्छन् । यस बेलासम्म वातावरणमा सितलता आईसकेको हुन्छ । सोसल डिस्टेन्सलाई परिपालना गर्दै १० बर्षे एरियाना ढुङ्गेल इनलाइन स्केट र हेलमेटमा विस्तारै सडकमा गुड्न थालिन् । अर्का ३ वर्षे एरिन् ढुङ्गेल पनि आमाको साथमा साना खुट्टाले फुटवल खेल्न थाले । ९ वर्षे सुलक्षण ढुङ्गेल,७ वर्षे क्रिस्टल पौडेल, १०बर्षे आदित्य ढुङ्गेल र ९वर्षे प्रसुन ढुङ्गेल चौर पट्टीको भागमा जिम्यास्टीक हान्दै थिए । स्वफुर्त मग्न मनहरुले खेलेको खेल हेर्दा मानौ यस स्थानमा लकडाउन ‘नो टेन्सन’ ।
फेरी त्यही माथिबाट दिपेन्द्र खरेल इनलाइन स्केटमा बेग संग आए । संगसंगै मनोज आचार्य हात छोडेर साईकिङ्गमा अनलिमिटेड स्पिडमा हुईकिदै थिए । नविन ढुङ्गेल पनि स्केटबोर्डमा घाप्टो परि सुतेर हावासंगै गुडेको भावमा मग्न थिए । यि तमाम कृयाकलापहरुको भिडियो क्यामरामा कैद गर्न सुदन ढुङ्गेललाई हम्मेहम्मे पर्दै थियो । सुदनलाई यि दृश्यहरु कैद गर्न अगाडी अगाडी मोटर साईकल चलाएर अजय ढुङ्गेल साथ दिदै थिए । उता अनुप आचार्य पनि उक्त दृश्यहरु मोवाइलमा कैद गर्न हौसि रहेका थिए । माहोल एका एक अनौठो भएर आयो । त्यसैले होला धेरै इभिनिङ्गवाक गर्ने जनसमुदायहरु टक्क उभिएर रमिता हेर्न थाले । सबैको मनमा यो के गर्न लागिएको हो भन्ने कौतुहलता लाग्यो । कसैले सुटिङ्गको तर्क काटे । हेर्दा कुनै विकसित देशको शहरको सडकमा खेलिएको खेल जस्तो । तर यथार्थता भने यि सबै खेलहरु ‘लोकल स्टन्ट’ व्यायम थियो ।
घर भित्र कहिले टि.भि.,कहिले आफ्नै आई टि को काम ,कहिले सामाजिक संजाल सधै यही गर्दा दिक्क लाग्छ । कहिले बेलुकाको ५बज्छ र घर बाहिर निस्केर त्यही सडकमा जाउँ जस्तो लाग्छ
कागेश्वरी मनोहरा न.पा. वडा नं ६ काठमाडौं ढुङ्गेल गाउँको यस सडकमा आजकाल यस्ता रमाईलो खेलहरु देखिन थालेको छ । ‘कोरोना (कोभिड १९)का कारण नागरिकहरुको जिवन रक्षा गर्न सरकारले लकडाउन गरेपछि स–साना बालबालिकाहरु ,स्कूल जाने उमेर समुहका बालबालिका र उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका तन्नेरीहरू घर भित्र बस्न बाध्य भएका छन । उनीहरुको मानसिक र शारिरीक तनाव हटाउन दिनको एक दुई घण्टा भए पनि यस्ता खेलले मद्दत मिल्ने गरेको छ । त्यसैले आफ्नो बच्चाहरुलाई सुरक्षित रुपमा बाहिर जान दिने गरेको सो वडाबासी समाजसेबी सरोज ढुङ्गेल बताउँछन । ’
विं.सं.२०७६ सालमा यस नगर पालिकाको वजेटमा कालोपत्र गरिएको उक्त सडकमा यस वडा र छिमेकी बडाका सबै उमेर समूहका मानिसहरुलाई जगिङ्ग गर्ने, खेल्ने, साइलिङ्ग र आराम गर्ने थलोको रुपमा चिनिन थालेको छ ।
‘घर भित्र कहिले टि.भि.,कहिले आफ्नै आई टि को काम ,कहिले सामाजिक संजाल सधै यही गर्दा दिक्क लाग्छ । कहिले बेलुकाको ५बज्छ र घर बाहिर निस्केर त्यही सडकमा जाउँ जस्तो लाग्छ । त्यस समयसम्म प्राय सबै गाउँका साथीभाईहरु त्यहाँ पुग्छन । सोसियल डिस्टन्स कायम गरेर आफु पनि खेल्ने र साना साना भाईबहिनहरुलाई खेल्न सिकाउँदा धेरै आनन्द आउँछ ।’ अनि दिनभरको तनाव पनि नरहने तर्क गर्छन सामाजिक युवा अभिन्यता अरुण ढुङ्गेल । आफुलेनै यस ठाउँमा यस्तो खेलको सुत्रपात गरकोले नै आज सबैले सिक्ने मौका पाएको उनको दावी छ ।
‘गाडीको चहल पहल न्यून, फराकिलो सडक । हरियाली र स्वच्छ वातावरणले अन्य ठाउँको तुलनामा यस ठाउँको प्रदुषण निकै कम भएको वातावरण इन्जिनियर द्धारिका फुयालको बताउँछन । ‘त्यसैले सधै यस ठाउँमा मनिङ्ग वाक र इभिनिङ्ग वाक गर्न आउने गर्दछु ।’ उनले भने । यहाँ आउँदा आनन्द आउने र भाईबहिनीहरुले अनुशासिसत रुपमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको खेलिने खेलको निखारता देखेर अचम्भित भएको तर्क गर्छन् । यस्तो खेलले संपूर्ण भाईबहिनीहरुको शारिरीक र मानसिक विकास हुने र यस्ता खेलले अन्य वडाका भाईबहिनीहरुलाई पनि प्रेरणा हुने इन्जिनियर फुयाँल दावी गर्छन ।’
भर्खरै बसन्तले छाडेर गएको हरियाली । ग्रिष्मको घाम अनि वर्षाको मलजलले अझ हरियाली बनाएकोे सडक संगै जोडिएका पाखो र नजिकै रहेको हरियो वन । घामको अन्तिम प्रहर त्यही प्रकृतिमाथि स्पर्स गर्दा साच्चैको आहा प्रकृती ! कसको मन हर्षित नहोला र ? त्यहि प्रकृतीको उमङ्गले मग्नमनहरु खेललाई डवल स्टन्ट दिन आतुर हुन्छन ।
आज सन्ध्याको अन्तिम प्रहर फुटबलको विभिन्न रुपको कुसलता प्रर्दशन गरिरहेका ,सदिस ढुङ्गेल ,आयुस ढुङ्गेल,संस्कार ढुङ्गेल,सक्षम पौडेल पनि थाकेका देखिन्छन । सुभेक्षा ढुङ्गेल र अग्रिमा ढुङ्गेल पनि स्केटबोर्ड सिक्दा सिक्दा थाकिसके । छोई डुम खेल्नेहरु पनि थाक्दै जान थाले । खेल खेलेर थाकेका तनहरु फेरी सडक छेउपट्टीको भागमा बसेर रमाईलो गर्न थाल्छन । सोसल डिस्टेन्सको नियम पालना गरेर पहिला कोरोनासंग बच्न प-यो । अनि मात्र खेलका समिक्षा अनि मात्र रमाईलो । प्रसान्त ढुङ्गेल, सदिच्छा ढुङ्गेल, युनिसा ढुङ्गेल , संस्कृती ढुङ्गेल, र आर्यन ढुङ्गेल लगायतका खेलाडीहरु रमाइलो प्यारोडी गीत गाउँछन । गीत सुनेर ऋषिराम ढुङ्गेल यसरी हास्छन । उनको हाँसो सुनेर गाउँवरपरका केके न भयो भनेर कान टाँठा राख्दै थिए । यस बेलासम्म झक्मे साँझका झ्याउकिरि कराउन थालिसकेका हुन्छन् । अव बाँकी खेल भोली ।